दलाई लामाले ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन’ भन्नुको भित्रि रहस्य यस्तो ! Darpansansar News
दलाई लामाले ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन’ भन्नुको भित्रि रहस्य यस्तो !
काठमाडौं । भारतमा निर्बासन जीवन विताइरहेका धर्मगुरु दलाई लामाले ‘बुद्ध नेपालमा नभई भारतमा जन्मिएका हुन’ भनेर अभिब्यक्ति दिएको भिडियो सार्बजनिक भएपछि सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
भिडियोमार्फत दलाई लामाको अभिब्यक्ति सुनेपछि नेपालीहरुले सामाजिक संजालमा ब्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । लामाप्रति नेपालीहरुमा गलत भावना पैदा भएजस्तो देखिएको छ । सामाजिक संजालमा ब्यक्त धारणाहरु अनुसार नेपालीहरु लामाप्रति अत्याधिक क्रुद्ध भएका छन् ।
बेलायतमा बस्ने नेपालीहरुले त सडकमै उत्रिएर लामाको अभिब्यक्तिको चर्को विरोध गरेका छन् । भारतको चाकरी गर्नकै लागि झुटो कुरा नबोल्न उनिहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । लामाविरुद्ध ‘आफ्नो स्वार्थका लागि भारतीय गुलामी बन्द गर’ भन्ने नारा बेलायतमा लागेको एनआरएनए युकेले जनाएको छ ।
धर्मोदय सभाले त धर्मगुरु दलाई लामालाई भ्रम र झुटको खेती नगर्न आग्रह समेत गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सभाले लामा जस्ता धार्मिक व्यक्तित्वले गौतमबुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको जनाएको हो ।
यसरी विश्वभरबाट लामाप्रति आक्रोशहरु पैदा भइरहेका छन् । लामाले भारतमा बसेर किन यस्तो अभिब्यक्ति दए भन्नेबारे अनेक थरी अडकलबाजीहरु भईरहेका छन् । भारतमा बसेर पश्चिमा मुलुकको डलरमा चलेर चीनबिरोधी गतिविधि गरिरहेका लामाको उपरोक्त अभिव्यक्ति उनको ‘दलाली’ भनेर विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
भारतमा शरण लिएरपछि भारतकै ‘नूनको सोझो’ गर्नै पर्ने बाध्यता पनि उनलाई परेको अनुमान पनि गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई चीन, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, जापान लगायतका देशले बुद्ध धर्मको प्रचार र विकासमा अधिक खर्च गरेको भारतलाई मन नपरेको र भारतकै उक्साहटमा लामाले ‘कार्ड’ फालेको पनि विश्लेषण गरीएको छ ।
बुद्ध नेपालमा जन्मिएका नभएर भारतमा जन्मिएका हुन भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री समेतले पश्चिमा मुलुक र राष्ट्रसंघमा भाषण गर्न थालेपछि गैरआवासीय नेपालीहरुले विश्वव्यापी रुपमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दै अभियान नै चलाए । तर बुद्धअवतारका रुपमा आफूलाई चिनाउने १४ औं दलाई लामाले बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको हैन भनेर भाषण गर्नुको भित्री कारण भारत र पश्चिमा मुलुकलाई रिझाउनु बाहेक अन्य केही कारण नहुने पनि एकथरीको बुझाई छ ।
वुद्ध धर्मका धर्मगुरु दलाई लामाले बुद्धकै बारेमा भ्रम फैलाउनु उनको अज्ञानता हैन उनलाई पालन पोषण गर्ने शक्तिहरुको स्वार्थ हो भनेर पनि विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा अभिब्यक्ति आएका छन् । किनभने उनलाई अमेरिकी एवं पश्चिमेली शक्तिहरुले तिब्बतको सीमित घेराभित्रको चीन विरोधी राजनीतिमा सक्रिय गराउँदै आएको अडकल पनि पहिल्यै देखि हुँदै आएको छ ।
उनले बुद्ध जन्मेको बेलामा नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै नरहेको बताउँदै भारतमै जन्मेको जिकिर गरेका छन् । लामाले इशापूर्व २५०० को प्राचीन समयमा नेपाल भन्ने कुनै देश अस्तित्वमा नरहेको पनि दाबी गरेका छन् । त्यो बेला चीनसम्म फैलिएको एउटा सिङ्गो विशाल भारत रहेकोले बुद्धलार्इ भारतमा जन्मेको मान्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
प्रवचनका क्रममा लामाले आफूले कहिल्यै पनि बुद्ध धर्मलार्इ सबैभन्दा उत्कृष्ट नभनेको जिकिर गरेका थिए । ‘बुद्ध मात्रै होइन, अन्य कुनै एक धर्मलार्इ मात्रै उत्कृष्ट धर्म हो भन्न हामी सक्दैनौँ’, उनले भनेका छन् ।
दलार्इ बुद्धबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेको यो भिडियो कहाँ खिचिएको भन्ने खुलेको छैन । तर, बुद्धबारे उनले टिप्पणी गर्ने क्रममा भारतीयमूलका केही व्यक्तिले केही सिकाइरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । भारतीय मूलका देखिने मानिसको उपस्थिति हेर्दा कार्यक्रम भारतको कुनै स्थानमा भएको बताइएको छ ।